Fotoana famakiana: 7 minitra Misy fomba am-polony hanatsarana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny loko amin'ny bokotra fiantsoana ka hatramin'ny fanandramana sehatra vaovao dia afaka manome valiny tsara kokoa ho anao. Saingy tsy midika izany fa tetika fanatsarana UA (User Acquisation) rehetra hitanao fa mendrika hatao. Tena marina izany raha manana loharanom-bola voafetra ianao. Raha ao amin'ny ekipa kely ianao, na manana teritery amin'ny teti-bola na fotoana voafetra, dia hisakana anao tsy hanandrana ireo fetra ireo